Tartanka Horyaalka Ciyaaraha Fudud ee Nicholas Bett Dies | TeraNews.net
Tartanka Horyaalka Ciyaaraha Fudud ee Nicholas Bett Dies
qoraaga artem La daabacay 08.08.2018
Shilalka baabuurtu waxay galaaftaan nolosha daraasiin dad ah maalin kasta. Bini’aadamka ayaa xusaya dhibaatada oo keliya kiisaskaas marka shakhsiyaadka caanka ahi dhintaan. Xusuusnow, ugu yaraan Viktor Tsoi - hees caan ah oo caan ah oo ka mid ah dhalinyarada 90's. Ama Princess Diana, oo ku dhimatay Paris, shil gaari. Xiddigaha pop-ka, jilayaasha filimada, ciyaartooyda iyo siyaasiyiinta - dhimashada waddooyinka cidna kama badbaadinayso. Marka, 7 ee Agoosto 2018 ee sanadka, halyeeyga ciyaaraha fudud Nicholas Bett wuu dhintay.
Horyaalkii adduunka ee halganka ku dhintay wuxuu da 'yaraa - 28 sano. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee IAAF, shilka wuxuu ka dhacay waqooyi-galbeed Kenya, Nadi.
Nooca rasmiga ah - Gaadhiga maamulin.
Saxaafadda ayaa xustay in ku guuleystihii hore ee adduunka ee ciyaaraha fudud Nicholas Bett, uu ka soo laabtay tartamada soo socda ee lagu qabanayo Afrika, uuna gadaal ka riixay gaariga. Cimilada cimilada iyo socodka qoyan ayaa abuuri kara xaalad degdeg ah. Gaariga ayaa ku cararay ceelka.
Nicholas Bett wuxuu caan ka noqday adduunka adduunka Beijing, halkaas oo 2015 uu ku helay billad dahab ah. Fogaanta mitirka 400 mitir, Keenyaanka ayaa dhigay rikoor. Waxaa xusid mudan in ciyaartooydii 28-sano jirka ahayd uu noqday horyaalkii ugu horreeyay taariikhda Kenya masaafad ka yar mitirka 800.
Baaskiil koronto Xiaomi Mi Mijia Electric Scooter
Windows 10 Dhis 2021 ama nidaamka cusub ee hawlgalka
Norton 360 antivirus wuxuu bartay macdanta Ethereum
Hadron Collider weyn oo diyaar u ah cilmi baaris
Gumeysiga Dayaxa - Talaabooyinka Kowaad ee Amazon
GAZ-51, kaas oo xawaareynaya 205 km / h